China Yakasarudzika Yakaomarara Fit Fabric Nhabvu Kits Mitambo Yeyunifomu vagadziri uye vanotengesa | Lotte
Tee & Singlets
Maitiro Ekutanga Bhizinesi Kubatana
Factory High Quality Coral Fleece Lady Onesies Kumba ...
Fekitori OEM Onesies Kisimusi mapyjamas nyeredzi hood
Yakasarudzika Yakaomarara Fit Fabric Nhabvu Kits Yemitambo Unifomu
Tsika Yakaomarara Yakakodzera Nhabvu Kits Soccer Uniform
Outdoor Winter Windproof Thicken Thermal Kutsigira Colla ...
High Quality 100% Polyester Green Fleece bhachi kuti M ...
OEM Yakasarudzika Kudhinda Logo Yakakwira Mufashoni Sweatpants
Unisex Cotton Drawstring Chiuno Anoshanda Sweatpants wit ...
V-mutsipa kusiyanisa t shirt
Ruvara inowirirana zvikabudura
Yakaomeswa jira jira
Customizable timu logo uye nhamba
Ipa chitambi, chirembera tag, zvishongedzo uye kurongedza tsika sevhisi.
1 muhombodo yebopu, 50 mukatoni
MOQ: zvidimbu zana.
Kazhinji isu tinoshandisa polyester machira kugadzira Soccer Jersey.
Mucheka uremu huwandu
Kurema kwejira kunogona kugadzirwa kana huwandu hwasvika zvidimbu chiuru.
Mirairo pamusoro pe1000 zvidimbu inogona tsika ruvara sekukumbira.
Mirairo pasi pe1000 zvidimbu inogona kusarudza kubva pane yedu kara chati.
Tinogona kupa yakajairwa UK, US uye Asia saizi.
Kana paine chero zvakakosha zvaunoda, unogona kutaurirana nesu kuti usangane nemirairo yako.
Logo tekinoroji sarudzo
Nekudhinda: silika skrini yekudhinda, kudhinda kwerabha, kudhinda kwepombi, kudhinda goridhe kudhinda, sirivheri foil kudhinda, kupisa kupisa kudhinda, sublimation, yakananga kudhinda kwedhijitari uye 3D embossed kudhinda nezvimwe.
Ipa tsika yemutsipa chitaridzi, sleeve chitaridzi, pasi chitaridzi, chitarisiko chitaridzi hang tag nezvimwewo.
1 chidimbu muhombodo yebopu, zvidimbu makumi mashanu mubhokisi remabhokisi.
Bhegi uye bhokisi remabhokisi zvakare rinogona kuvezwa.
Zvidiki zvidiki zvinoshandisa kuratidza kununura, seDHL, UPS, SF yekudhinda.
Zvakawanda zvakakura zvinowanzoendesa negungwa.
Sales Passionate kutengesa inokubatsira iwe kuziva zvigadzirwa zvedu uye fekitori
♢ Nyanzvi yehunyanzvi & kutaurirana kunofungidzirwa kuchengetedza nguva yako
Workers Vashandi vane ruzivo vanogona kuvimbisa kuti tinogona kuburitsa zvinhu sezvamunoda
♢ Yakasimba kuongororwa kuti utarise yega chigadzirwa chigadzirwa usati warongedza
Pashure: Tsika Yakaomarara Yakakodzera Nhabvu Kits Soccer Uniform
Zvadaro: Fekitori OEM Onesies Kisimusi mapyjamas nyeredzi hood
Mubvunzo: Ndezvipi zvinhu zvaunogadzira?
A: Zvinhu zvedu zvikuru zvakarukwa machira mbatya, senge t shirt, polo shati, hoodies & sweatshirt, tangi yepamusoro, mitambo yekupfeka uye mapyjamas nezvimwe.
Mubvunzo: Chii chako MOQ?
A: Yedu MOQ ndeye 100pcs, ruvara uye saizi inogona kusanganiswa.
Mubvunzo: Kuchengeta kwenguva yakareba kunotora nguva yakareba sei?
A: Kazhinji inotora mazuva gumi nemashanu kusvika makumi mashanu zvichienderana nehuwandu.
Mubvunzo: Ndeupi mutemo wako wekuenzanisira？
A: 1. Kana iwe uchingoda chete kuona kana machira masitayera, tekinoroji kana kudhinda kwakanaka, saka chingoda mari yekutumira kuti utore imwe sampuro yatiinayo kare, senge mhando dzese t shirts, polo shati, hoodies & sweatshirts, bhurugwa nezvimwe.
2. Kana uchida kuona yako logo dhizaini mhedzisiro, senge yakadhindwa / yakashongedzwa tsika logo kana chero zvinhu zvitsva zvatisina muruoko, ipapo sampuro fizi inodiwa kuronga machira, logo dhizaini yekutanga mari yekuita digitizing iyo logo kubva mufananidzo kune yekudhinda pateni kana yemhando yekushongedza uye echinyakare zvinyorwa (mutsipa chitupa, saizi chitaridzi, geza chitaridzi nezvimwe),
3. Dhijitari yekutanga muripo ndeimwe-yenguva fizi (kunze kwekunge iwe uchishandisa nyowani logo dhizaini, kana chete zvishoma gadziridza inogamuchirwa) Iyi fizi ichadzorerwa kana kubvisirwa kubva pauwandu pane nzvimbo odha inosangana neMOQ yedu.
Mubvunzo: Ndingaisa sei odha?
A: Tinogamuchirwa kutitumira quote uye kutarisa webhusaiti yedu yepamutemo: Zvakare iwe unogona kutiwana isu kuburikidza neemail: sales6@johncabot.cn, Anna Xu. Kana iwe uchida kushanyira fekitori yedu iyo ingave iri rukudzo rukuru. Tichakuratidza nemufaro kutenderedza.
Mubvunzo: Ungabhadhara sei?
A: Parizvino tinogamuchira T / T yehuwandu, Paypal yemuenzaniso. Dzimwe nzira dzinogona kutauriranwa.
Sublimation Mitambo Yunifomu
Cheap Gadzirisa Yemunhu Brand Fashoni Varume Casu ...
Customized Premium yepamusoro Long Sleeve Elbow Pa ...
Outdoor Winter Windproof Thicken Thermal Kutsigira ...
Wholesale Yakasarudzika Logo Plain Polo Shirt ye ...
Wholesale Cotton Fleece Hoodie Kudonha Papfudzi
OEM Yakasarudzika Kudhinda Logo Yakakwira Fashoni Sweat ...
Kwete. 6 Qianhu maindasitiri nzvimbo, Luojia taundi, Qingshanhu dunhu, Nanchang guta, Jiangxi dunhu, China.